I-V YABADALI BEVENDETTA ABANEKRATSHI KWI-GUY FAWKES MASK ISISIMBOLI - ALAN MOORE
Ii-Freaks Kunye Neegeek
I-V yeVendetta Abadali banelunda I-Guy Fawkes Mask iye yangumqondiso woPhulo
Abanye abantu abadumileyo banxiba imaski kaGuy Fawkes kwindibano yeencwadi ezihlekisayo ukuhamba emgangathweni kungabonwa, abanye abantu bayinxiba njengesinxibo kodwa imaski yenziwa yathandwa UAlan Moore kwaye UDavid Lloyd kuthotho lwabo lwee-comic zowe-1980 V yeVendetta ikwangumfuziselo wenyambalala yabantu, into abadali bayo abaziqhenya ngayo ngokukodwa.
Bobabini umbhali kunye nomculi kutshanje bathethe noonondaba malunga nemaski eyahlukileyo ethandwayo ukuba isetyenziswe ngexesha loqhanqalazo. Kutshanje Ongaziwayo ubasebenzisile ukuqhankqalaza iScientology kunye nabaqhankqalazi eZuccotti Park abazisebenzise ngexesha le-Occupy Wall Street.
Isigqubuthelo seGuy Fawkes ngoku siye saba luphawu oluqhelekileyo kunye neplacard efanelekileyo esinokuyisebenzisa xa sikhalazela ubuzwilakhe-kwaye ndonwabile ngabantu abayisebenzisayo, utshilo uLloyd I-BBC , kubonakala ngathi yahlukile, i-icon yenkcubeko edumileyo isetyenziswa ngale ndlela.
Ndicinga xa ndandibhala V yeVendetta Bendiya kuthi kwintliziyo yam efihlakeleyo yeentliziyo ndicinge: ngekhe kulunge ukuba ezi zimvo zinempembelelo? Kutshanje uMoore uxelele UMgcini kudliwanondlebe olunqabileyo. Ke xa uqala ukubona la maphupha angasebenziyo angenelela kwihlabathi eliqhelekileyo… Ayifani. Ivakala ngathi ngumlinganiswa endamdalayo kwiminyaka engama-30 eyadlulayo ngandlela thile ubalekile kummandla wobuxoki.
V yeVendetta Libali elibekwe kwikamva laseBritane apho urhulumente wobuzwilakhe egcina ukuvala ngokungqongqo kubemi bakhe. Umlindeli, ohamba ngegama le-V, ujikeleza kubo aze ahlangane nabanye kwisizathu sakhe se-anarchic ngelixa enxibe njengoyena mntu uphambili kwimbali, uGuy Fawkes. Ngo-1605, i-Fawkes yenza umzamo ongaphumeleliyo wokuqhushumba iBritish House of Lords njengenxalenye yeGunpowder Plot kodwa yehla kwimbali yakhe.
Imaski yayisetyenziswe iminyaka ngaphambi komdlalo weqonga ngexesha lokubhiyozelwa kobusuku bukaGuy Fawkes. Kuze kube yifilimu ka-2006, ehlengahlengiswe yiWachowski yescreen esikhulu, apho imask enesithokothisi yadubula yathandwa. Imvakalelo yam kukuba iqela elingaziwayo lifuna umfanekiso weenjongo zokufihla ubuni babo kwaye babonakalise ukuba bamele ukuzimela, utshilo uLloyd, ekubonakala ukuba undwendwele iZuccotti Park ukuze azibonele ngokwakhe uqhankqalazo. V yeVendetta libali lomntu omnye ngokuchasene nenkqubo.
Xa ufumene ulwandle lweemaski ze-V, ndicinga ukuba yenza ukuba abaqhankqalazi babonakale ngathi yinto enye-le 99% siva kakhulu ngayo, utshilo uMoren. Loo nto ngokwayo iyothusa. Ndiyabona ukuba kutheni ababhikishi beye kuyo.
Ngokwe-BBC, iRubies Costume Inkampani, eyenza imaski, ithengisa malunga ne-100,000 ngonyaka kwihlabathi liphela, kunye ne-16,000 e-UK, ngokutsho kwesithethi uSteve Kitt, obonakala ekhathazekile kancinci ukuba nabuphi na umbutho nabaphembeleli banokwenzakalisa umfanekiso wenkampani.
Ndicinga ukuba sendiyiqhelile loo nto, yokuba ezinye zeentsomi zam zixubene nehlabathi, utshilo uMorey. Ndicinga ukuba kufanelekile ukuba esi sizukulwana sabaqhankqalazi senze uvukelo lwabo lube yinto yoluntu ngokubanzi enokuthi ibandakanyeke ngokulula ngakumbi kunokubetha iingoma ezinentliziyo-yesiqingatha, kunye nolo hlobo lwesiko, oluphantsi koqhankqalazo lwase-Bhritane. Aba bantu bakhangeleka ngathi bangabo ube nexesha elimnandi . Kwaye oko kuthumela umyalezo omkhulu.
(nge Kotaku )
Ngaphambili e-Occupy Wall Street
USusie Cagle unika iAkhawunti yobuqu yokuBanjwa kwe-Oakland Arrest kwaye ayisiyiyo intle
Lusuku lukaGuy Fawkes! Ke, ngaba iMask yona yona imele ntoni?
Abalinganiswa beFictional React to Occupy Wall Street
I-seattle aquarium octopus ibulala ukrebe
Elf yabasetyhini kwi-hobbit
paranoia arhente yocwangciso losapho
iipaki kunye neholo yedolophu rec
iingoma malunga nokuba sisikhohlakali
UJerry seinfeld kunye no-shoshanna lonstein
Ukubamba kukaJohn isilivere enkulu